Degmada Jowhar oo laga dareemay isbedel dhinacyada Amaanka, Ganacsiga iyo isdhexgalka Bulshada ah | Radio Muqdisho
Degmada Jowhar oo laga dareemay isbedel dhinacyada Amaanka, Ganacsiga iyo isdhexgalka Bulshada ah
Published on January 27, 2013 by Mowliid · 1 Comment · 3,320 views
Isbadalo ayaa laga dareemayaa magaalada Jowhar ee goblka Shabelaha Dhexe kadib markii ay amnigeeda xaqijiyeen ciidanka Qaranka Soomaaliyeed, iyadoo bulshaduna ay hada wadashaqayn la yeesheen hay’adaha amniga.
Magaalada Jowhar ee Xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe oo Laba bilood ka hor laga faramaroojiyay maleeshiyaadka Shabaab ayaa laga dareemay isbedel dhinaca Amniga, ganacsiga iyo isdhexgalka Bulshada ah, kadib markii ay ciidamadu ku guuleysteen sugida amaanka Lixda xaafadood oo ay ka koobantahay magaalada Jowhar.
Howlgalada Joogatada ah oo ay habeen iyo maalin ciidamaduu ka wadaan Magaalada Jowhar ayaa inta badan lagu soo qabqabtaa maleeshiyaad ka tirsan Shabaab oo ku dhuumaaleysanaya xaafadaha degmadaasi, iyo kooxo isticmaala Maandooriyaha.
Sidoo kale dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Jowhar ayaa laga dareemay isbedel muuqda wixii ka dambeeyay markii maleeshiyaadka Alqaacida laga saaray degmadaasi, kuwaas oo cuuryaamiyay ganacsiga degmada Jowhar, iyadoo hada ay dadku si xor ah u ganacsadaan.
Cali Cusmaan Ibraahim gudoomiye ku xigeenka gobolka Sh/Shexe ayaa Radio Muqdisho u sheegay in degmada Jowhar laga dareemay isbedel iyo horumar dhinacyada Amaanka, Ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada, wuxuuna tilmaamay in arintani ay ku timid wadashaqeynta u dhaxeysa maamulka, ciidamada iyo Shacabka ku nool degmada Jowhar.
iqtarib says:	January 27, 2013 at 11:07 pm	asc marka hore waxaan salaamaya abaan duu laha cii damada iyo taliyaha guud g\_dhaga badan iyo dhamaan ciidamada kusugan dagmada jowharwaa mahadsantahiinwaxaan idinkugu hambalyeena hormarka aadkagaarten amaanka magaalada jowhar waxaan idin rajeena bash bash iyo barwaaqo iyo inaan maqlo idinko lawareegay mgaalada mahaday waa mahad san tahin